नून र उच्च रक्तचाप - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
नून र उच्च रक्तचाप
विमललाल सि.कु. श्रेष्ठ
सन् २००५ देखि हरेक वर्ष मे १७ को दिन विश्व रक्तचाप दिवश मान्ने गरिआएको छ । यस्तै यसवर्ष पनिदेखि नेपालले पनि विश्व उच्चरक्तचाप दिवस मनाउन गइरहेका छौं । यसवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवशको नारा हो “स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ रक्तचाप” ।
हाम्रो जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्ने भन्नाले शरीर स्वस्थ राख्नको लागि उचित खालको खाना खाने बानी बसाल्ने, शरीरलाई सक्रिय राख्न योग, व्यायाम, खेलकुद आदि जस्ता क्रियाकलापमा दैनिक एकाधघण्टा समय दिई शरीरलाई स्वस्थ राख्ने र सकारात्मक सोचहरु राख्ने, अनावश्यक मानसिक तनावबाट मुक्त रहने हुन आउँछ । स्वस्थ खालको खाना सम्बन्धमा विगत केहि दशक अगाडिसम्म खानेगरी आएका खानाहरुको तुलनामा अहिले हामीले खाने गरेका खानाहरु अस्वस्थकर हुँदै आएकोले उच्च रक्तचाप, हृदयघात तथा पक्षघात जस्ता प्राणघातक रोगहरु दिन प्रतिदिन बढ्न गई यस्ता रोगहरुवाट पीडितहरु गाउँघरमा २० प्रतिशत र शहर बजार तथा शहर बजार नजिकका गाउँहरुमा २५–३० प्रतिशत पुगेसकेको विज्ञहरुको अनुमान छ । यसैले २५÷३० उमेरका युवाहरु पनि यी रोगहरुको कारण मर्ने गरेको हामीले दैख्दै आएका छौं । अघि भर्खरमात्र देखेको थिएँ ….. विते छ” भन्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । यी रोगहरुको कारण वर्षेनी विश्वमा १ करोड ८० लाख भन्दा बढी मानिसहरु मर्ने गर्दछन् । आगामी २०२० सम्ममा यो संख्या २ करोड ५० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यी रोगहरुको कुनै लक्षण हुँदैनन् र रोगलागेर ढलिसकेपछि मात्र थाहा पाइने यो रोगको उपचार निक्कै खर्चिलो छ । अझ अपरेसन नै गर्नु परेमा त साधारण परिवारलाई समस्यै हुन्छ । हृदयघात तथा पक्षघात रोग लाग्नुका कारणहरुमा मुख्य कारण उच्च रक्तचाप पनि एक हो । उच्च रक्तचाप हुनुका धेरै कारणहरु छन् । त्यसमध्ये एउटा कारण हामीले खाने गरेका खानामा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रा भन्दा बढी नून सेवन गर्ने आदत हुनु पनि एक हो ।
नून हामीलाई नभई नहुने खाद्य तत्व हुन् । खानाको माध्यमबाट प्राप्त नूनलाई शरीरको लागि चाहिए जति सतहमा राखेर बढी भएको नूनको भागलाई पिसाबको रुपमा शरीर बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौलाले गर्ने गर्दछ । तर शरीरमा अत्यधिक नूनको मात्रा बढ्न गएमा यो रगतसँग मिसिएर बग्न थाल्दछ । रगतमा नूनको मात्रा बढ्न गएमा यसले शरीरवाट पानी सोस्न थाल्दछ प्यास लाग्ने गर्दछ, परिणाम बढी पानी खानाले रगतमा पानीको मात्रा बढ्न गई रक्तनलीमा रगतको घनत्व बढ्न जान्छ र परिणाम रक्तचाप बढ्न थाल्दछ । यसरी शरीरको लागि चाहिने भन्दा नूनको मात्रा बढ्न गएमा उच्च रक्तचापकोे रोग लाग्न थाल्दछ ।
समयमै खानामा नूनको मात्रामा कमी ल्याई उच्च रक्तचापलाई कम गरिएन र समयमै चिकित्सकको सल्लाह लिई उपचार गरिएन भने मानिसको मृत्यु समेत हुन्छ वा बाँचीहाले पनि हृदयघात, पक्षघात, मृर्गौलाघात, दृष्टिघात भई बाँच्नुपर्ने विपत्तिपूर्ण स्थिति आउन सक्दछ । यी रोगहरुको उपचार बढी खर्चिलो हुन्छ र अपरेशन गर्नु परेमा साधारण परिवारको लागि त समस्यै हुन्छ । यसरी उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगका विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा कारण खानामा चाहिने भन्दा अधिक नूनको प्रयोग पनि एक हो ।
 खानामा दाल, तरकारी, अचार तथा अन्य धेरै थरिका नूनिला परिकारहरु खाने गर्नाले शरीरमा नूनको मात्रा बढ्न गई उच्च रक्तचाप रोग लाग्ने हुनाले दैनिक खानामा नून्को मात्रा आधा चिया चम्चा (तीन ग्राम) भन्दा बढी सेवन नगर्ने बानी बसालौं ।
 दिनदिनै थरिथरिका नूनिलो परिकार सहितको खानाखाने बानीले कतै तपाईमा पनि उच्च रक्तचाप त भएको छैन ? रक्तचाप मापन गरेर हेर्ने गरौं ।
 परिवारमा १८ वर्ष माथिका सबैजनाको बरोबर रक्तचाप परीक्षण गर्ने बानी बसालौं ।
 उच्च रक्तचाप १३०÷९० र सो भन्दा माथि छ र तपाई चुरोट खाने गर्नूहुन्छ वा मोटो हुनुहुन्छ वा अधिक मात्रामा नूनिलो, गुलियो, चिल्लो भएको खाना खाने गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त मुटुरोग विशेषज्ञ वा नजिकको चिकित्सककहाँ गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरौं । किनभने उच्च रक्तचापका माथिका कुनै पनि कारक तत्वका कारण तपाईलाई रोग लागेको हुन सक्छ ।
 उच्च रक्तचाप १४०÷९० र सो भन्दा माथि छ भने मुटुरोग विशेषज्ञ वा नजिकको चिकित्सककहाँ गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरौं । हेलचक्राई गर्ने गरेमा उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगले कुनै पनि बेला तपाइलाई ढाल्न सक्छन् । किन भने यी रोगहरुको कुनै लक्षण हुन्दैनन् ।
यसरी उच्च रक्तचाप रोग हुनुका विविध कारणहरु छन् । त्यसमध्ये नून पनि एक भएकोले खानामा आवश्यकता भन्दा बढी नून प्रयोग नगर्नु राम्रो हो । तर खानामा नूनको मात्रा एकैचोटि घटाउँदा खाना बेस्वादको हुने हुनाले साविक खाँदै आएको दैनिक खानामा परिवर्तन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसको लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ, जस्तै ः
१, साविक खाँदै आएको प्रत्येक परिकारहरुमा हप्ता दिनको लागि १० ग्राममा चिया चम्चामा १÷४ (चौथाई) ग्राम नून कम प्रयोग गर्ने, अर्को हप्ता १÷२ (आधा) चम्चा कम गर्ने यसरी हप्ता हप्तामा क्रमशः नूनको मात्रा कम गर्दै छ जनाको परिवारमा प्रति ब्यक्तिको भागमा दैनिक ३ ग्राममा नूनको मात्रा कायम राख्ने कोसिश जारी राख्ने ।
२, खानामा नूनको परिकार कम गर्ने, जस्तै दालको सट्टा दूध वा दही र अचार वा तरकारी मध्ये कुनै एकथरि मात्र नूनिलो परिकार सेवन गर्ने ।
३, खानामा दाल र तरकारी दुई थरि परिकारको ठाउँमा तरकारीमा झोल हाली एक थरि मात्र नूनिला परिकार प्रयोग गर्ने ।
४, नूनको मात्रा कम गर्न आफ्नो अनुकुलका अन्य तरिकाहरु अपनाउने ।
यसबाहेक उच्च रक्तचाप तथा यसबाट हुने अन्य रोगहरु हुनुमा करक तत्व नून मात्र नभई अन्य कारणहरु पनि छन् । जस्तै खानामा गुलियो, चिल्लो तथा बोसोयुक्त खाना, धूमपान तथा सूर्तीजन्य वस्तुहरुको सेवन, अधिक मद्यपान, मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, महिलाहरुमा गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग आदि हुन् । यसैले उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगहरुवाट बच्न निम्न अनुसारका कुराहरुमा ध्यान दिन बेश हुन्छ ।
 सूर्तिजन्य बस्तुहरु सेवन बन्द गर्ने र धुम्रपान गरिरहेकाहरुको अगाडि नपर्ने ।
 मध्यपान नगर्ने ।
 खानामा चिल्लो गुलियो तथा नूनको प्रयोग कम गर्ने ।
 शारीरिक रुपले सक्रिय जीवनशैली अनुशरण गर्ने ।
 नियमित रुपमा रक्तचाप मापन गरिहेर्ने ।
 साविक जीवनशैली परिवर्तन गर्ने ।
 शरीरको तौल बढन नदिने । नियमित योग वा ब्यायाम गर्ने ।
 तनाव मुक्त जीवन जीउने ।
 नियमित औषधि सेवन गर्ने । उच्च रक्तचाप ठीक भएको अवस्थामा पनि चिकित्सकको सल्लाह विना औषधि सेवन बन्द नगर्ने ।
 आफूलाई कुनै रोग लागे जस्तो नभए पनि वर्षको एकचोटि नियमित रुपमा मुटुरोग विशेषज्ञकहाँ गई स्वाथ्य परीक्षण गर्ने ।